बंगालको खाडीबाट नेपालमा छिर्यो मनसुन, कस्तो पर्ला यसको प्रभाव ? « Salleri Khabar
बंगालको खाडीबाट नेपालमा छिर्यो मनसुन, कस्तो पर्ला यसको प्रभाव ?
२८ जेठ, काठमाडाैँ । ‘मनसुनजन्य’ विपद् (मुख्यगरी बाढी पहिरो)बाट यसपटक १८ लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष औसत बराबर पानी पर्ने प्रक्षेपण हुँदा ठूलो मानवीय क्षति बेहोरेको नेपाल सामु सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने आँकलन गरिएको मनसुन चुनौतीपूर्ण रहने मौसमविदले औंल्याएका छन् ।